တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူအတွက် ၁၉ လက်မအရွယ်ထိန်သိမ်းသည့် ၄၈V 50Ah lithium ion battery (LiFePO4) mounting | LIAO
တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သူ ၁၉ လက်မအရွယ်ထိန်သိမ်းထားသော 48V 50Ah lithium ion battery (LiFePO)4) ဆက်သွယ်ရေးသည်
Abs casing သည် 2000+ စက်ဘီးဘိုင်အက်စစ်နှင့်အတူသက်တမ်းရှိ lithium ion battery 12V 100Ah ဖြစ်သည်
Bolt အမျိုးအစား prismatic 3.2V 10Ah LiFePO4 ပါဝါထောက်ပံ့ရေးနှင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်ဘို့ဘက်ထရီဆဲလ်
Built-in charger နှင့် SOC တို့ပါ ၀ င်သော Caravan မောင်းနှင်မှု LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 ဘက်ထရီ
SOC နှင့်လက်ကိုင်တွင်လျှပ်စစ်စကူတာ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ ဘမ်ပါကားများအတွက် 36V 40Ah LiFePO4 ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်
AC နှင့် DC output များပါ ၀ င်သည့်အရောင်းအဝယ်အမျိုးမျိုးသောအိတ်ဆောင် power supply
1. 48V 50Ah LiFePO တပ်ဆင်ထားသော ၁၉ လက်မရှည်သောထိန်သိမ်း4 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအတွက်ဘက်ထရီ pack ကို။
၂။ သံမဏိသက်တမ်း: အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် lithium ion battery ဆဲလ်သည် ၂၀၀၀ ကျော်သံသရာရှိသည်။ ၎င်းသည်ခဲအက်ဆစ်ဘက်ထရီ၏ ၇ ဆဖြစ်သည်။
မက်စ် စဉ်ဆက်မပြတ်တာဝန်ခံလက်ရှိ 60A
မက်စ် စဉ်ဆက်မပြတ်ရိနာစွဲလက်ရှိ 60A
သံသရာဘဝ times2000 ကြိမ်
အားသွင်းအပူချိန်0ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
discharge အပူချိန် -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ 60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
သိုလှောင်အပူချိန် -20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အလေးချိန် ၃၀ ကီလိုဂရမ်လောက်
အတိုင်းအတာ 440mm * 320mm * 133mm
လျှောက်လွှာ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်အပြင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်＆လေစွမ်းအင်၊ အိမ်စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်း၊
၃။ သာလွန်ကောင်းမွန်သောလုံခြုံမှု - စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အသိအမှတ်ပြုထားသောအလုံခြုံဆုံး lithium battery အမျိုးအစား။
RS232 သို့မဟုတ် RS485 ၏ဆက်သွယ်ရေး funtion နှင့်အတူ 4. ။
၅။ စင်ပြိုင်လုပ်ဆောင်ချက် - စွမ်းရည်ကိုတိုးချဲ့ရန်အပြိုင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
6. အဘယ်သူမျှမမှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှု, မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ, SOC ညွှန်ပြချက်နှင့်အတူ။
နေစွမ်းအင် (စွမ်းအင်) စနစ်နိဒါန်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်စနစ်တွင်ဆိုလာဘက်ထရီများ၊ နေရောင်ခြည်သုံးကိရိယာများနှင့်ဘက်ထရီများ (အုပ်စုများ) ပါဝင်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်၏ output စွမ်းအင်သည် AC 220V သို့မဟုတ် 110V ဖြစ်လိုပါကအင်ဗာတာကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။
၁။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစနစ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းစနစ်သည်အဓိကအားဖြင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအစိတ်အပိုင်းများ၊ ထိန်းချုပ်သူများနှင့်ဘက်ထရီများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ output power သည် AC 220V သို့မဟုတ် 110V ဖြစ်ပါကအင်ဗာတာတစ်ခုလိုအပ်သည်။
၂။ Grid-connection ပါဝါထုတ်လုပ်မှုစနစ်ဆိုသည်မှာဆိုလာ module များမှထုတ်လုပ်သော current ကို current current သို့ grid power ချိတ်ဆက်ထားသောအင်ဗာတာမှလိုအပ်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးသည့်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသို့ပြောင်းလဲပြီးအများသုံးဇယားကွက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသားအဆင့်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံများဖြစ်သော Grid-ချိတ်ဆက်ထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်စနစ်များသည်ဗဟိုမှအကြီးစားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများကိုဗဟိုပြုထားသည်။ အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာထုတ်လုပ်ထားသည့်စွမ်းအင်သည်ဇယားကွက်သို့တိုက်ရိုက်ပို့လွှတ်ပြီးသုံးစွဲသူများအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရန်ဇယားကွက်ကိုဖြန့်ဝေထားသည်။ သို့သော်ထိုသို့သောဓာတ်အားပေးစက်ရုံမျိုးသည်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးကာလနှင့်ရှည်လျားသောareaရိယာများရှိသည်။ ဖြန့်ဝေထားသောအသေးစားဇယားကွက်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်၊ အထူးသဖြင့် photovoltaic အဆောက်အအုံပါ ၀ င်သည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစနစ်သည်အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မြန်ဆန်သောဆောက်လုပ်ရေး၊ သေးငယ်သောခြေရာနှင့်ကြီးမားသောမူဝါဒအထောက်အပံ့များ၏အားသာချက်များကြောင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
၃။ ဖြန့်ဖြူးထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစနစ်သည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်း (သို့) ဖြန့်ဝေသောစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုဟုလည်းလူသိများသည်။ အသုံးပြုသူဆိုက်ရှိ photovoltaic power supply စနစ်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနေရာနှင့်နီးသည်။ လက်ရှိဖြန့်ဖြူးသောကွန်ယက်စီးပွားရေးလည်ပတ်မှု (သို့) ဤရှုထောင့်နှစ်ခု၏လိုအပ်ချက်များကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ Abs casing သည် 2000+ စက်ဘီးဘိုင်အက်စစ်နှင့်အတူသက်တမ်းရှိ lithium ion battery 12V 100Ah ဖြစ်သည်
နောက်တစ်ခု: အသေးစားအရွယ်အစားပေါ့ပါးသောအလေးချိန် 6V 10Ah Lifepo4 built-in BMS နှင့်အတူဘက်ထရီ pack ကို
ကျယ်ပြန့်စွာအလုပ်လုပ်သောအပူချိန်မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှု 12V 60Ah လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် online monitoring အတွက်
တပ်ဆင်ထားသော UPS ဘက်ထရီ 48V 40Ah လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီတပ်ဆင်ထားသည့် ၁၉ လက်မအရောက်တွင်
အသေးစားအရွယ်အစားပေါ့ပါးသောအလေးချိန် 6V 10Ah Lifepo4 built-in BMS နှင့်အတူဘက်ထရီ pack ကို
BMS နှင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအပြားဒီဇိုင်း 12V 10Ah LiFePO4 ဘက်ထရီ
2000+ သံထည်သက်တမ်းရှိသတ္တုထည် 12V 12Ah LiFePO4 ဘက်ထရီသည်အလင်းရောင်စနစ်အတွက်
အိတ်ဆောင် ABS အိတ်ဆောင်ပါဝါထောက်ပံ့ရေး 48 Volt 30Ah လီသီယမ်ဘက်ထရီ